Sida loo sii qulquli Video ka PC (ama laptop) in TV?
Xiriirka aad laptop in TV iyo hoorto videos iyo filimada si toos ah TV noqon kartaa waayo-aragnimo fiican oo dhab ah. Marka la eego in, shaashad weyn ha kartaa aad ku raaxaysato videos u fududeeyo si ay u arkaan faahfaahinta wanaagsan HD videos. Waxaad ku samayn kartaa laba siyaabood, sidoo kale ku xira PC (ama laptop) in TV isticmaalaya fiilooyinka iyo fiilooyin ama il videos ka PC (ama laptop) in TV wirelessly isticmaalaya interface sida Wondershare Video Convertor Ultimate. Ina keena aynu aragno sida ay u sii qulquli videos ka PC (ama laptop) in TV.
Qaybta 1aad: Sida loo sii qulquli ka PC (ama laptop) in TV Isticmaalka fiilooyinka?
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli ka PC (ama laptop) in TV wirelessly?
Qeybta 3: Extended Aqoonta: Best TV Streaming Devices
Qeybta 4: Download Video Free la TunesGo Wondershare
Si aad u xidhi aad PC in TV isticmaalaya fiilooyinka ku xiran tahay oo dekedaha ayaa lagaa siinayaa TV. Sida laga soo xigtay in dekedda laga heli karo, waxaad dooran kartaa cable iyo xiriiriyaan TV in ay PC. Guud ahaan, waxaad u baahan tahay sidoo kale dekeda ah HDMI ama dekedda VGA ah iyo 3.5 mm dekedda ah audio in ay leeyihiin video iyo wax soo saarka audio in aad TV. Halkan tallaabooyinka in lagu xiro PC (ama laptop) in TV isticmaalaya cable ah in ay sii qulquli videos.
Dekedda HDMI iyo dekedda VGA lagu muujiyey iyadoo jaalaha iyo casaan siday u kala horreeyaan ee image hoos ku siiyo:
Ku qor hal dhammaadka cable HDMI dekedda dambe ee laptop ama PC iyo dhamaadka kale oo cable ah in ay dekedda dambe ee TV. Xaaladdan oo kale, qalab aad ma laha ah dekedda saarka HDMI markaas aad ku xidhi karaa iyadoo la isticmaalayo adabtarada HDMI ah.
In kastoo HDMI cable waa ikhtiyaarka ugu fiican in ay ku xidhmaan laptop ah in PC laakiin ay dhacdo in aadan haysan dekedda HDMI ah in qalabka markaas waxaad isticmaali kartaa cable VGA ah. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa hogaanka 3.5 mm loogu soo saarka audio ah.
Ka dib marka aad mid ka mid ah laba fiilooyinka kor ku xusan in ay ku xirmaan, waxaad ka arki kartaa video hoorto ku set TV aad.
Inkastoo, waxaa suurto gal ah in ay ku xidhmaan PC in TV iyo qulquli videos isticmaalaya fiilooyinka laakiin taabato fiilooyinka ma ku haboon tahay. Aadida wireless waa dhaqankan cusub ee isku xirnaanta ee qalabka si isku xira laptop in wireless TV waa fikrad fiican. Waxaad qulquli karaan videos ka laptop in TV wirelessly isticmaalaya Wondershare Video Convertor Ultimate.
Halkan waxaa ku qoran talaabooyinka aad u baahan tahay in ay raacaan si ay u sii qulquli ka PC ama laptop in TV isticmaalaya Wondershare Video Convertor Ultimate.
Download Wondershare Video Convertor Ultimate ka halkan .
Riix Mudanayaasha video Converter.
Sanduuqa wadahadal A furi doonaa. Hubi checkbox siiyey hoose ee sanduuqa wadahadal iyo guji badhanka rakib.
Rakibaadda bilaabi doonaa gudaha dhawr sekan. Ha dhamaystiran.
Ka dib markii la rakibey dhameystirtay aad arki doontaa sanduuqa wadahadal ah sida ka muuqata shaxanka hoose siiyo. Riix bilaabatay in aan bilowno codsiga.
Interface An muuqan doonaa sida ku cad image hoos ku siiyo. Waxaad arki doontaa afar isha sare ee interface codsiga. Riix afaraad mid "server warbaahinta".
Waxaad u baahan tahay mid ka mid ah qalabka geeyo soo socda in ay ku xidhmaan aad laptop in TV isticmaalaya Wondershare Video Convertor Ultimate.
Madaxweyne Siilaanyo Oo 360
Riix dejinta si ay u gudbiyaan video (oo aad rabto in aad sii qulquli) si interface ka.
Browse aad video ka PC / laptop disk adag oo guji furan.
Hadda waxaad awoodi doontaa inaad aragto video ku jira interface ah sida ku cad image ka.
Riix video ay u bilaabaan geeyo oo sug ilaa ay bilowdo.
Your video waxaa hoorto.
Hadda, aad ku raaxaysan karaan hoorto video shaashadda TV aad.
Waxaad isticmaali kartaa fudud oo si sahlan loo isticmaali interface u hoorto videos ka PC (ama laptop) si aan TV isticmaalaya cable kasta.
Daawashada video aad jeceshahay ama filim shaashadda, iriddu waa ka daran yahay. Si aad u sii qulquli aad video on TV, waxaad u baahan tahay qalab interface geeyo oo aad u sii qulquli iyo daawato videos ka laptop in TV ku haboon a. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu fiican qalabka geeyo TV talinayaa in aad u.
Roku 3 waa shirkad Saratoga ku salaysan ee flagship streamer. Waa streamer dhamaystiran oo ka mid ah muuqaalada dhan updated. Waxay leedahay in ka badan 2,000 oo channels, adeeg raadinta cross-madal intuitional, iyo interface user aad u haboon cajiib ah. Waxa uu ka dhisay-in Wi-Fi iyo sidoo kale in la xiran karaa iyadoo la isticmaalayo cable Ethernet u la xidhiidha dhakhso. Booska microSD A wax yaabahan gaarka ah ee Roku 3.
2. Amazon Naarta TV
Gado, Amazon .
Tani waa Amazon ee isku day hore sida a geeyo dhigay-sare boxand waxa uu noqday in dadka isticmaala ku caan ah. Qalabka waxa aad u saamaxaaya in ay geeyo free of filimada iyo bandhigyada TV. Waxaa jira sidoo kale ka muuqatay codka-raadinta anfacaya heli karaa aalad tan oo ka dhigaysa mid u gaar ah. Waa sahlan tahay si aad u isticmaasho oo si fiican u taageerto qalab.
Gado, Apple Store
TheAppleTV waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan geeyo laga helo suuqa. Inta badan oo ka mid ah TV'yada Apple la AppleAirplay iyo macruufka Remote siin waayo-aragnimo u gaar ah in dadka isticmaala ay. Waxaad si fudud u wadaagi kartaa sawiro iyo videos shakhsi ka macruufka qalabka la isticmaalayo TV Apple ah.
4. Roku Streaming ul
Qalab Tani waa run ahaantii anfacaya, is haysta oo la qaadi karo taas oo uu leeyahay ku dhowaad dhammaan astaamaha ku sugan flagship Roku 3. Tani Streaming ul waxaa laga heli karaa qiimaha qalabka flagship badhkiis. Waxa aanu lahayn godadka headphone laakiin leeyihiin badhamada fog iyo toobiye u barnaamijyadooda sida Netflix. Habkaani waa wax fudud in la isticmaalo iyo karo waxa ay taasi arrin qalab geeyo la jecel yahay.
5. Google Nexus Player
Gado, BestBuy .
Qalab geeyo Tan waxaa loo soo saaray iyadoo ay Asus. Waxay bixisaa biilasha sida baadhi cod-firfircoonaan, talooyin, iyo taageero integratedgame. Qalabka waa wax fudud si ay ula wadaagaan videos kale iyo sanamyo la marayo telefoonada smart iyo kiniiniyada. Ciyaaryahanka Nexus Google ma laha dekedda anEthernet.
A qalab geeyo qiimaha yar yahay, ugu fiican ee ku haboon in ay macaamiisha la miisaaniyad dhagan. Tani waa qalab dongle HDMI ah oo uu helo lifaaq TV adiga oo isticmaalaya dekedda HDMI. Waxay awood u user a si qulquli jecel videos ay isticmaalaya smart telefoonada, kiniiniga ama laptops. Waa sahlan, la qaadi karo, qalabka jeebka-saaxiibtinimo oo si sahlan loo isticmaali ah.
7. Amazon Naarta TV ul
Waxa kale oo qalab yar yahay jaban loogu geeyo. Tani qalab is haysta oo la qaadi karo ka Amazon waxay bixisaa ku dhowaad yutiilitida oo dhan sida Amazon Naarta TV. Waa tartan af badan u Roku ul iyo Google Chromecast. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala tostream cajiib ah 1080p HD video la Dolby Digital Plus hareereeya codka ah.
8. Sky TV Hadda Box
Tani waa streamer ah mid aad u yar miisaaniyadda ka Roku, iyadoo si fudud ah si ay u isticmaalaan interface iyo qaab hufan. In ay qalab la awoodi karo oo leh waxyaabo wanaagsan waa doorasho fiican kuwa u baahan tahay si ay u daawadaan ciyaaraha kubadda cagta marmar ama taxane ah oo aadan rabin in uu aad u badan oo ku saabsan streamer a sameeyo.
Dooro qalabka video geeyo si taxadar leh si waafaqsan miisaaniyadda oo looga baahan yahay, sababtoo ah waxaa jira wax badan oo doorasho laga helo suuqa oo aad iyo waxqabadka fiican ku siin kara.
Converter DVD talinayaa oo macmal ah Videos
> Resource > Video > Sida loo sii qulquli Video ka PC (ama laptop) in TV?